အဘယ်ကြောင့်ကြီးစိုးသီအိုရီခွေးပညာပေးရန်အချည်းနှီးဖြစ်သနည်း | ကမ္ဘာ့ခွေးများ
မော်နီကာ Sanchez | | ခွေးများနှင့်ခွေးများကိုအစာကျွေးခြင်း
နှစ်ပေါင်းများစွာကခွေးများသည် alpha ခေါင်းဆောင်သို့မဟုတ်ခွေးများဖြင့်အခြားသူများကိုနှိမ်နင်းသောထုပ်ပိုးများ၌နေထိုင်ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကဤအချက်သည်မမှန်ကြောင်းအတည်ပြုသော်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်အထူးသဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှကြည့်လျှင်ခွေးတစ်ကောင်၏ကြီးစိုးမှုသီအိုရီသည်အလင်းပြန်ပေါ်လာသည်။
လူသည်ခွေးအားမိမိကိုယ်ကိုပြဌာန်းရန်၊ တာဝန်ခံသည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုခွေးအားဆုံးဖြတ်ရန်သူသည်သူဖြစ်ကြောင်းပြသူများမှာနည်းပြများဖြစ်သည်။ ငါတို့သူငယ်ချင်းကောင်းကောင်းပညာပေးချင်ရင်သိဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ် အဘယ်ကြောင့်ခွေးတစ်ကောင်ကြီးစိုးသီအိုရီခေတ်မမီတော့ဖြစ်ပါတယ်.
သူတို့ကဒီသီအိုရီအကြောင်းကျွန်တော့်ကိုပြောတိုင်းဖရန့်ကိုခေတ်တုန်းကကလေးတွေကိုပြည့်နေတဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခုကိုငါစိတ်ကူးလို့မရဘူး။ အရွယ်မရောက်သေးသူတွေကိုသူတို့အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိတိုင်းမကြိုက်တဲ့အခါတိုင်းပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေကြောင့်လူသိများလာတဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့စာသင်ခန်းတစ်ခုကိုငါစိတ်ကူးလို့မရဘူး။ ရိုက်နှက်ခြင်းကိုအခြေခံသည့်ဤ“ အပြစ်ပေးခြင်း” ကသူတို့ကိုပြုမူရန်သင်ယူခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်၊ သို့သော်သူတို့သည်ကြောက်ရွံ့မှုဖြင့်စာသင်ခန်းသို့သွားရန်သေချာသည်
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့်ခွေးများနှင့်လေ့ကျင့်ထားသောခွေးများသည်အလားတူအရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ကြသည် - ၎င်းတို့သည်မထိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုနှိမ့်ချသည်။။ သူတို့ကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချလိုက်၊ ထိလိုက်၊ ကန်တာတောင်တောင်မှ (နူးညံ့သေးပေမဲ့ကန်ဆဲ) ။ သူတို့ဟာအဲဒီလိုနည်းနဲ့မလေ့လာကြဘူး။ ဒီတော့သူတို့လေ့လာသင်ယူတာကကြောက်စိတ်နဲ့နေဖို့ပဲ။
ရုပ်မြင်သံကြားမှာကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့် "alpha dogs" လိုပြုမူရမယ်လို့ပြောပေမယ့်ကျွန်တော်တွေးမိတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့ခွန်အားမျိုးဖြင့်ပြုမူနိုင်မည်နည်း။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွေးများမဟုတ်ပါကနောက်ဆုံးတွင်ကြီးစိုးမှုသီအိုရီကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖယ်ရှားပစ်လိုက်လျှင်? ဒီသီအိုရီကိုခုခံကာကွယ်သူများသည်လုံးဝကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းမဟုတ်ပါ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့လက္ခဏာ သူမတစ်ခုခုကိုမကြိုက်သည့်အခါသို့မဟုတ်သူသည်သင့်အားကြည့်နေစဉ်မိမိကိုခေါင်းမော့သည့်အချိန်တွင်သူ၏ခေါင်းကိုအခြားတစ်ဖက်သို့လှည့်ခြင်းကဲ့သို့သော (ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Turid Rugaas မှ "Calm of Signs" စာအုပ်ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်) ။
ထိုင်းနှင့်ကမ္ဘာမှနာမည်ကြီးတိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတစ် ဦး ၏စကားလုံးများကို (စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် in) ဤနည်းဖြင့်နှိမ်နှင်းရန်နှင့်သင့်စကားကိုနားထောင်ရန်သင့်လျော်သောစကားလုံးများကိုသင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖျက်ဆီးရမည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့စဉ်းစားရန်သင်ခွင့်မပြုပါဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့နဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေရခဲ့သလိုမျိုးဘယ်တော့မှသင်ယူမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများနှင့်ခွေးများကိုအစာကျွေးခြင်း » အဘယ်ကြောင့်ကြီးစိုးသီအိုရီခွေးပညာပေးရန်အချည်းနှီးဖြစ်သနည်း